ဟင်းချက်ဆီ သိမ်းဆည်းနည်း မှန်ရဲ့လား………… - Property Knowledge in Myanmar | iMyanmarHouse.com
ဟင်းချက်ဆီ သိမ်းဆည်းနည်း မှန်ရဲ့လား…………
26 May 2021 4:09 pm တွင် တင်ခဲ့သည်
756 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီး
ဗဟုသုတ |	Posted by နှင်းအိခင် (iMyanmarHouse.com)
ဆီ (ဟင်းချက်ဆီ) ဆိုတာက ဟင်းလျာတိုင်းမှာ မပါမဖြစ် ပါဝင်ရတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ ဟင်းတစ်ခုကို ချက်ပဲ ချက်ချက်၊ ကြော်ပဲ ကြော်ကြော်၊ အသုပ်ပဲ သုပ်သုပ် ဆီမပါရင် မရပါဘူး။
ဒါတင်လားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ငါးခြောက်လေး မီးကင်ပြီးရင်လည်း စားကောင်းအောင်ဆိုပြီး ဆီဆမ်းတယ်၊ လက်ဖက်လေး ထောင်းပြီးရင်လည်း ဆီလေး မြုပ်နေအောင်စိမ်ထား တတ်သေးတယ်နော်။ အကြောင်းကတော့ ဆီကဟင်းလျာတွေရဲ့ အရသာကို တိုးစေလို့ပါ။
ဒီလို ဟင်းလျာတိုင်းရဲ့ အရေးပါတဲ့ ဇာတ်ဆောင် ဟင်းချက်ဆီလေးကို သိမ်းဆည်းတဲ့နည်း မှန်ရဲ့လား………..
ဟင်းချက်ဆီကို ဘယ်လို သိမ်းလေ့ရှိလဲ………….
ဟင်းချက်ဆီက ဟင်းလျာတွေကို အရသာတိုးစေသလို ဟင်းချက်ဆီက ထိန်းသိမ်းပုံ မမှန်တာကြောင့် ပျက်စီးသွားရင်လည်း ဟင်းလျာတွေရဲ့ အရသာကို ပျက်စီးစေပါတယ်။
ဟင်းချက်ဆီက သက်တမ်း ကြာတဲ့အခါ ပျက်စီးတတ်သလို ထားသိုပုံ မမှန်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်း ပျက်စီးတတ်ပါတယ်။ ဆီဂျေးစော် နံတယ်ဆိုပြီး ပြောကြတယ်။ ဒါက ဟင်းချက်ဆီ ပျက်စီးတာပါ။
နေရောင်နဲ့ မထိတွေ့တဲ့ နေရာမှာ ထားပါ – နေရောင်က ဆီကို ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်း တစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့် ဆီကို ပုလင်း အနောက် ဒါမှမဟုတ် ဗူး အနောက်ထဲကို ထည့်ထားပါ။ နောက်တစ်ချက်က ဆီပုလင်း၊ ဆီဗူးတွေကို နေရောင်နဲ့ တိုက်ရိုက် မထိတွေ့နိုင်တဲ့ ကြောင်အိမ်လို နေရာမှာ ထားပေးပါ။
မီးအပူနဲ့ ဝေးဝေးထားပါ – နောက်ထပ် ဖြစ်တတ်တာ တစ်ခုက ဟင်းချက်ဆီကို ချက်ပြုတ်တဲ့အခါ လွယ်ကူအောင် ဆိုပြီး မိးဖိုနားမှာ ထားတတ်တာပါ။ တကယ်က ဟင်းချက်ဆီကို မီးအပူနဲ့ နီးနီးမှာ ထားတာက ဟင်းချက်ဆီကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
အေးမြတဲ့နေရာမှာ ထားပါ – ဆီကို အေးမြတဲ့နေရာမှာ ထားတာက အာဟာရတန်ဖိုး မပျက်စီးသလို အရသာလည်း ကောင်းစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆီကို အခန်း အပူချိန်မှာပဲ ထားမယ်ဆိုရင်တောင် အေးတဲ့နေရာမျိုးမှာ ထားပေးပါ။ ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်သိမ်းထားလို့လည်း ရပါတယ်။ နှမ်းဆီ၊ နေကြာဆီ၊ ပြောင်းဖူးဆီတွေကို ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ သိမ်းတာ အကောင်းဆုံးပါ။
လေလုံအောင်ထားပါ – ပျော့သွားနိုင်တဲ့ အရာတွေကို လေလုံအောင်ထားတတ်ပေမယ့် ဆီကိုတော့ လေလုံအောင် ထားမိခဲကြမယ် ထင်ပါတယ်။ တကယ်ကတော့ ဆီကိုလည်း သေချာ လေလုံအောင်ထားဖို့ လိုပါမယ်။
ကဲ… အနံ့အရသာ ပြည့်စုံပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ဟင်းချက်ဆီလေး ဖြစ်စေဖို့ ဒီအချက်လေးတွေကို လိုက်နာကြည့်လိုက်နော်။
ဟင္းခ်က္ဆီ သိမ္းဆည္းနည္း မွန္ရဲ႕လား…………
ဆီ (ဟင္းခ်က္ဆီ) ဆိုတာက ဟင္းလ်ာတိုင္းမွာ မပါမျဖစ္ ပါဝင္ရတဲ့ အရာတစ္ခုပါ။ ဟင္းတစ္ခုကို ခ်က္ပဲ ခ်က္ခ်က္၊ ေၾကာ္ပဲ ေၾကာ္ေၾကာ္၊ အသုပ္ပဲ သုပ္သုပ္ ဆီမပါရင္ မရပါဘူး။
ဒါတင္လားဆိုေတာ့ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ငါးေျခာက္ေလး မီးကင္ၿပီးရင္လည္း စားေကာင္းေအာင္ဆိုၿပီး ဆီဆမ္းတယ္၊ လက္ဖက္ေလး ေထာင္းၿပီးရင္လည္း ဆီေလး ျမဳပ္ေနေအာင္စိမ္ထား တတ္ေသးတယ္ေနာ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဆီကဟင္းလ်ာေတြရဲ႕ အရသာကို တိုးေစလို႔ပါ။
ဒီလို ဟင္းလ်ာတိုင္းရဲ႕ အေရးပါတဲ့ ဇာတ္ေဆာင္ ဟင္းခ်က္ဆီေလးကို သိမ္းဆည္းတဲ့နည္း မွန္ရဲ႕လား………..
ဟင္းခ်က္ဆီကို ဘယ္လို သိမ္းေလ့႐ွိလဲ………….
ဟင္းခ်က္ဆီက ဟင္းလ်ာေတြကို အရသာတိုးေစသလို ဟင္းခ်က္ဆီက ထိန္းသိမ္းပုံ မမွန္တာေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားရင္လည္း ဟင္းလ်ာေတြရဲ႕ အရသာကို ပ်က္စီးေစပါတယ္။
ဟင္းခ်က္ဆီက သက္တမ္း ၾကာတဲ့အခါ ပ်က္စီးတတ္သလို ထားသိုပုံ မမွန္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာလည္း ပ်က္စီးတတ္ပါတယ္။ ဆီေဂ်းေစာ္ နံတယ္ဆိုၿပီး ေျပာၾကတယ္။ ဒါက ဟင္းခ်က္ဆီ ပ်က္စီးတာပါ။
ေနေရာင္နဲ႔ မထိေတြ႕တဲ့ ေနရာမွာ ထားပါ – ေနေရာင္က ဆီကို ပ်က္စီးေစႏိုင္တဲ့ အဓိက အေၾကာင္းအရင္း တစ္ခုပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဆီကို ပုလင္း အေနာက္ ဒါမွမဟုတ္ ဗူး အေနာက္ထဲကို ထည့္ထားပါ။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဆီပုလင္း၊ ဆီဗူးေတြကို ေနေရာင္နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ မထိေတြ႕ႏိုင္တဲ့ ေၾကာင္အိမ္လို ေနရာမွာ ထားေပးပါ။
မီးအပူနဲ႔ ေဝးေဝးထားပါ – ေနာက္ထပ္ ျဖစ္တတ္တာ တစ္ခုက ဟင္းခ်က္ဆီကို ခ်က္ျပဳတ္တဲ့အခါ လြယ္ကူေအာင္ ဆိုၿပီး မိးဖိုနားမွာ ထားတတ္တာပါ။ တကယ္က ဟင္းခ်က္ဆီကို မီးအပူနဲ႔ နီးနီးမွာ ထားတာက ဟင္းခ်က္ဆီကို ပ်က္စီးေစႏိုင္ပါတယ္။
ေအးျမတဲ့ေနရာမွာ ထားပါ – ဆီကို ေအးျမတဲ့ေနရာမွာ ထားတာက အာဟာရတန္ဖိုး မပ်က္စီးသလို အရသာလည္း ေကာင္းေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆီကို အခန္း အပူခ်ိန္မွာပဲ ထားမယ္ဆိုရင္ေတာင္ ေအးတဲ့ေနရာမ်ိဳးမွာ ထားေပးပါ။ ေရခဲေသတၱာထဲ ထည့္သိမ္းထားလို႔လည္း ရပါတယ္။ ႏွမ္းဆီ၊ ေနၾကာဆီ၊ ေျပာင္းဖူးဆီေတြကို ေရခဲေသတၱာထဲမွာ သိမ္းတာ အေကာင္းဆုံးပါ။
ေလလုံေအာင္ထားပါ – ေပ်ာ့သြားႏိုင္တဲ့ အရာေတြကို ေလလုံေအာင္ထားတတ္ေပမယ့္ ဆီကိုေတာ့ ေလလုံေအာင္ ထားမိခဲၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ တကယ္ကေတာ့ ဆီကိုလည္း ေသခ်ာ ေလလုံေအာင္ထားဖို႔ လိုပါမယ္။
ကဲ… အနံ႔အရသာ ျပည့္စုံၿပီး က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့ ဟင္းခ်က္ဆီေလး ျဖစ္ေစဖို႔ ဒီအခ်က္ေလးေတြကို လိုက္နာၾကည့္လိုက္ေနာ္။
နောက်ဆုံးရ အိမ်ခြံမြေ ဗဟုသုတများ
ခြေထောက်ကို ဆားရေစိမ်ခြင်းကြောင့် ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူး
ကြက်ဥတွေကို ရေခဲသေတ္တာ တံခါးပေါက်အကန့်မှာ ထည့်မထားသင့်
မီးပူ မီးအားပြင်းလို့ ကပ်ကျန်ခဲ့တာတွေကို ဖယ်ရှားပေးမယ့် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းများ
အိမ်မှာရှိတဲ့ ရှား‌စောင်းလက်ပတ်ပင်တွေက ရရှိနိုင်တဲ့ ဆန်းဆန်းပြားပြား အကျိုးကျေးဇူးများ
ကလေးတွေအတွက် ဆပ်ပြာပူဖောင်း အန္တရာယ်
နေ့တိုင်း ကြက်သားပဲ စားနေရလို့ ငြီးငွေ့နေပြီလား 🍗🍗🍗
“ဆပ်ပြာရည်” နှင့် “ဆပ်ပြာမှုန့်” - မည်သည်က အသုံးပြုရန် ပိုကောင်းသနည်း?
စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် မည်သည့်နေရာတွင် လက်မှတ်ထိုးရန်လိုမလဲ။
နေ့ခင်းနေ့လယ်တွေမှာ တရေးတမော အိပ်ပါ
380 သိန်း (ကျပ်)
Apartment for Sale in Bahan (Near Yankin Center) ထပ်ခိုးပါ
440 သိန်း (ကျပ်)
ကမာရွတ်မြို့နယ် တွင် တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါသည်။
မဂ်လာမွန်စျေး မြေညီ ဆိုင်ခန်း ဆိုင်နံပါတ်2** ကျော်